Chipper hazo miaraka amin'ny motera lasantsy / diesel / elektrika
Wood chipper dia karazan-tsolika mpitrandraka, izay ampiasaina amin'ny fikarakarana kesika, hazo isan-karazany, poplar, cemara sinoa, volotsangana ary fitaovana hafa. Mety kokoa amin'ny fanodinana poti-kazo amin'ny media kolontsaina holatra azo hanina.
Ny bozaka dia fitaovana mekanika amin'ny fanetezana bozaka, zavamaniry, sns. Izy io dia misy lohan'ny fanapahana, motera, kodiarana mandeha, mekanika mandeha, lozabe, fantsom-batana ary faritra fanaraha-maso.
Ny lohan'ny fanapahana dia napetraka amin'ny kodiarana mandeha, ny motera dia misy motera, ny vatan'ny motera dia misy lelany, ary ny lelany dia mampiasa ny fihodinan'ny motera haingam-pandeha hanatsarana ny hafainganana, mamonjy ny asan'ny mpiasa fotoana ary mampihena ny habetsaky ny loharanon'olombelona.
Famonoana otrikaretina Mampiasà fantsom-pamokarana zavona fogging thermal Fogger
Ny masinina dia be mpampiasa amin'ny fampiharana zezika, ny famonoana otrikaretina ary ny fanafoanana ny trano fonenana, ala, zaridaina, zaridaina dite ary voly hafa eny an-kalamanjana.
Karazana vy tsy misy fangarony ary milina fitrandrahana solika na zaridaina
Misaotra anao nampiasa ny milina fogging novokarin'ny orinasanay. Izy io dia karazana vokatra vaovao fikarohana tsy miankina ary novolavolain'ny orinasanay. Io no karazana mandroso be indrindra amin'ny vokatra ankehitriny. Ity masinina ity dia mifototra amin'ny fitsipiky ny motera teknolojia aérospace ary mandray motera pulsa tsy misy fikojakojana. Tsy misy faritra mihodina mandritra ny fandidiana, tsy misy akanjo sy rovitra eo anelanelan'ny ampahany, tsy ilaina ny fanosorana. Noho izany, tsotra ny fikojakojana ary lava ny androm-piainana. Ankoatr'izay, ny fanjifana solika ambany sy ny fahombiazan'ny asa avo lenta dia vokatra teknolojia avo lenta amin'ny famafazana pestisides sy famonoana otrikaretina.